Mashaariicda Wax-soo-saarka - Baakaynta Hal-abuurka BXL
Qalabka la isku qurxiyo Cunto Khamriga dahabka Cadar Shumaca udgoon
Hal-abuurka BXL wuxuu quseeyaa agab cusub, dhismayaal cusub & teknoolojiyad cusub, sida ka-hortagga been-abuurka, 3D UV, 3D embossing, qaabka grating indhaha, iyo khadadka kulaylka iwm, naqshadeynta baakadaha qurxinta iyo soosaarka, taasoo ka dhigaysa mid-nooc-nooc ah. .
Isla mar ahaantaana, baakadaha u habboon deegaanka ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaadanaya.BXL waxay qabataa shaqo aad u fiican oo dheelitiraysa naqshadaynta muuqaalka xirmada, shaqeynteeda & baahideeda deegaanka.
BXL Creative waxay siisaa walxo heer-cunto ah, FDA-ansixisay & xalalka xirmada eco ee macaamiisha cuntada heerka sare ah labadaba gudaha iyo dibaddaba.Markaad gaareyso xirmada quruxda badan, BXL kama dhimeyso welwelka badbaadada cuntada.
Baakadaha Wine & Spirits waa mid ka mid ah ganacsiga muhiimka ah ee BXL.Gaar ahaan suuqa Shiinaha ee gudaha, BXL Hal-abuurka waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee shirkadaha naqshadeynta xirmooyinka & soosaarayaasha, siinaya macaamiisha xalal wax soo saar leh oo furaha ah, oo daboolaya abuurista nooc cusub oo cusub oo ka socda cilmi baarista suuqa, fikradda, magacaabista, meelaynta sumadda, suuqgeynta xeeladaha, naqshadaynta boutique, naqshadaynta baakadaha, naqshadaynta buug-yaraha, iwm.
Waqtigan xaadirka ah, 80% alaabta baakadaha dahabka ah ee shirkadu waxaa loo dhoofiyaa Yurub & Waqooyiga Ameerika.Iyada oo leh waayo-aragnimo qani ah oo ku saabsan hawlaha dhoofinta iyo OEM & maamulka mashruuca ODM, BXL waxay dabooli kartaa dhammaan baahiyaha baakadaha ee macaamiisha.
Hal-abuurka BXL waxa uu leeyahay ganacsi baakadaha qaaliga ah oo ballaadhan, kaas oo cadarka/ udgoonka uu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan.Macaamiisha inta badan waxay ka yimaadeen Yurub, Waqooyiga Ameerika, Mid-Bari, Australia, iwm.
Hal-abuurka BXL wuxuu leeyahay khibrad sannado badan soo saarista baakadaha shumaca ur udgoon ee caalamiga ah, tan iyo markii ganacsigeeda caalamiga ahi bilaabmay.Ilaa hadda, macaamiishu waxay daboolaan inta badan noocyada caanka ah ee warshadaha.
Flake Barafka Barafka ah
Waxay gaari kartaa dhammayn dillaaca barafka.Marka lagu daro naqshad garaafyo, waxay abuuri kartaa muuqaal deco gaar ah.
Way ka saxsan tahay & ka saxsan tahay shaambada kulul ee caadiga ah.Qurxintan waxaa si gaar ah loogu sameeyay khadadka aadka u yaryar, caatada ah, dhibco, xarfo iyo qaabab, kuwaas oo aan lagu samayn karin shaambad kulul.Waxay ku gaadhi kartaa dhamaystirka shaambada bireed ee casriga ah oo leh meelayn aad u hufan oo sax ah.Waxa ay iftiiminaysaa qaabka macaankiisa, xarrago leh, xarrago, lakabyo badan iyo soo jiidasho.
Habkan waxaa lagu gaaraa in la isku daro shaabadda xariirta iyo shaabad kulul.Waxay si fiican u soo saartaa deco texture oo leh dhammaystir macdan ah, kaas oo ku siinaya patten leh texture birta gargaarka, keenaya saameyn muuqaal ah oo xoog leh iyo muuqaal macdan 3D ah.
Marka barta UV ay la kulanto saameynta 3D, waxay bixisaa taabasho weyn iyo saameyn muuqaal ah.
Abuurista saameyn hufan, gaaritaanka saameyn muuqaal oo xooggan.
Cadaadiska kulaylka, qaababka iyo khadadka ayaa loo beddelaa dusha sare ee warqadda, beddelidda midabka warqadda si ay u sameeyaan iftiinka iyo hooska ka soo baxa midabka asalka ah ee warqadda, taas oo xoojisa dareenka iyo dareenka gacanta ee xirmada.
3D qoto dheer oo qoto dheer
Qaababka iyo garaafyada raba inay gaadhaan lakab dheeri ah oo 3D emboss ah oo lakab ah oo abuuraya saameyn muuqaal oo xoog leh, BXL Hal-abuurka ayaa hubaal kuu samayn kara.
Ku dheji summada xaashida birta ah ee lagu beddelo summada birta
Qaababka xariijimaha iftiinka leh lakabyo isku dhafan iyo isku dhejisan iyo dareemada gacanta ayaa laga soo saaray walxaha caadiga ah ee warqadda-saldhigga iyada oo loo marayo nooca xariijimaha iftiinka gaarka ah si loo soo saaro saameyn qani ah oo qani ah, jilicsan iyo waxyaabo badan, sidaas darteed isbarbardhigga macdan xoog leh iyo saameynta muuqaalka.
Qaabka La Habeeyay
Habkan waxaa lagu gaaraa in la isku dhejiyo.Xulasho aan sharci ahayn oo khadad kala duwan ah ayaa laga yaabaa in la sameeyo si isku mid ah.Iyadoo loo marayo habka jireed, sawirka waxaa lagu maareeyaa in loo qaato xanuunka saddex-geesoodka ah ee sawirada leh iyo khadadka hannaankii cad, oo soo saaraya farxad, kala duwanaansho fiiqan iyo dareemo gacan oo wanaagsan.